News Collection: सामाजिक सञ्जाल, असामाजिक काम
सामाजिक सञ्जाल, असामाजिक काम
काठमाडौ, जेष्ठ २७ - हिजोआज नेपालमा सामाजिक सञ्जाल 'फेसबुक'मा रमाउनेहरूको संख्या बढ्दो छ । सबै वर्ग र उमेर समूहका व्यक्ति फेसबुकमा अकाउन्ट खोलेर सूचना आदान-प्रदान गरिरहेका हुन्छन् । हुन पनि फेसबुकमा अकाउन्ट खोलेपछि धेरै पुरानो र टाढाका साथीहरूसँग भेट त हुन्छ नै । साथै फेसबुकका माध्यमबाट एकैचोटी धेरै जनाकहाँ छिटो सूचना र आफ्ना विचार बाँड्न सकिन्छ । यसले गर्दा फेसबुकले सबैलाई लोभ्याएको हुनसक्छ । तर नेपालमा केही युवायुवतीले भने फेसबुकको दुरुपयोग गर्ने गरेका छन् । अझ महिलालाई नकारात्मक सन्देश प्रवाह गरी निरुत्साहित पार्ने गरेका छन् ।
काठमाडांैको एक प्रतिष्ठित कलेजमा कक्षा १२ मा पढ्ने श्रुति सिटौलालाई (नाम परिवर्तन) उसकै कलेजमा पढ्ने विनायक (नाम परिवर्तन) ले शरीरका सबैजसो भाग नांगै देखिने एउटा फोटोमा श्रुति र विनायकको अनुहार जोडेर विनायकले फेसबुकमा राखी पोष्ट गरेछन् ।
फोटोमा एकले अर्कालाई चुम्बन गरेको प्रष्ट देख्न सकिन्छ । फोटोसँगै विनायकले मेसेज के लेखेछन् भने 'डु यु नो ? हु इज दिस ? श्रुति लभ्स मी, द पिक्चर क्लियर इट' । यस किसिमको फोटो र मेसेज विनायकले फेसबुकमा हालेपछि कलेजमा र उनको टोलमा हंगामा नै मच्चियो । कलेजका साथीहरूले श्रुतिलाई नराम्ररी हेर्न थाले । इष्टमित्र सबैले श्रुतिको चरित्रमाथि प्रश्न उठाए । नराम्रो हौवा फैलिएपछि श्रुति नराम्ररी बिरामी परिन् । तर उनलाई घरका मान्छेले कहिल्यै हतोत्साही गरेनन् । किनभने श्रुतिका बाबुआमा शिक्षित छन् र दुबैले छोरीलाई राम्ररी सम्झाए पनि केही महिनासम्म श्रुति कसैसँग पनि बोलिनन् । टोलाइरहन् र केटा मान्छे देख्ने बित्तिकै भाग्न थालिन् । उनको यो व्यवहार परिवर्तनले परिवारका सबै सदस्य निराश भए । तर श्रुतिका अभिभावक उनलाई सामान्य अवस्थामा ल्याउन सफल भए । अहिले श्रुतिले फेसबुकको अकाउन्ट नै बन्द गरिदिएकी छन् ।
कुरा के भएको रहेछ भने श्रुतिलाई विनायकले निकै मनपराउँदो रहेछ । तर श्रुति भने उसलाई घृणा गर्दिरहिछन् । विनायकले राखेको प्रेम प्रस्तावलाई सोझै अस्विकार गरेका कारण बदला लिन विनायकले यस्तो गलत बाटो अपनाएका रहेछन् ।
प्रेम पछिको विछोड, एकतर्फी प्रेम तथा रिसइबीका कारण फेसबुक, युवक-युवतीमाझ अश्लील सन्देश प्रवाह गर्ने साधन बन्दै गएको छ । महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखामा सातामा दुई वटासम्म फेसबुकका मुद्दा लिएर पीडितहरू ज्ााने गरेका छन् । नक्कली फेसबुक अकाउन्ट बनाएर अश्लील फोटो तथा भिडियो अपलोड गरेर प्रवाह गर्नेको जमात नेपालमा बढ्दो छ । प्रेम हुँदा युवा-युवतीले फोटो आदान-प्रदान गर्ने र बिछोड भएपछि त्यसैलाई माध्यम बनाएर रिसइबी साध्न नक्कली फेसबुक अकाउन्ट बनाएर अश्लील फोटो तथा भिडियो अपलोड गर्ने गरेको पाइएको छ । प्रविधिमार्फत नग्न फोटोमा युवतीको फोटो टाँसेर फेसबुकमा राखिदिने तथा इन्टरनेटबाट अश्लील भिडियो डाउनलोड गरेर अपलोड गर्ने गरेको पाइएको छ । यस प्रकारको ठगी र अपराधबाट बच्न फेसबुकको सदस्य बन्नु अगाडि नै त्यसको गोपनीयता र असुरक्षा नीतिका बारेमा अध्ययन गर्नु अत्यन्त जरुरी छ । महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखामा डेढ वर्षमा फेसबुकसँग सम्वन्धित अश्लील खालका २५ भन्दा बढी उजुरी परेका छन् । महाशाखाले १० जनालाई विद्युतीय अपराध सजाय ऐन अन्तर्गत मुद्दा दायर गरेर कारबाहीसमेत गरिसकेको छ । यद्यपि नेपालमा कम्प्युटर इमर्जेन्सी रेस्पोन्स टिम नहुँदा पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने अपराध रोक्न समस्या छ । भारत, बंगलादेश लगायत सार्क मुलुकमा भने (सीआईआरटी) टिमको व्यवस्था गरिएको छ ।
यद्यपि २८ वर्षीय मार्क जुकवर्गले फेसबुकको विकास गरेका हुन् । यिनले विश्वभरका मानिसलाई साझा चौतारा बनाइदिएका छन् । यही चौतारामा भेला भएर विचारहरू आदान-प्रदान र छलफल गर्न सकिन्छ । वर्षौदेखि भेट नभएका आफन्त र साथीहरूलाई भेट्न सकिन्छ । ज्ञान, सूचना र मनोरञ्जन लिन सकिन्छ । कहिल्यै चिन्दै नचिनेका मानिस पनि फेसबुकमा साथी बनेका हुन्छन् । फेसबुककै माध्यमबाट साथीसँग सुखदुःख बाँड्न सकिन्छ । प्रशंसा, बधाई लगायत दुःखका बेलामा संवेदनासमेत दिन सकिन्छ । यति गुणकारी सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गर्नुभन्दा यसबाट कसरी बढी फाइदा लिन सकिन्छ भन्नेबारे सोच्नु आवश्यक छ ।